Yini iphupho kakhulu: incazelo iphupho
Uzhik eRussia bezilokhu kubhekwa uphawu yengcebo. Uma wahlala egcekeni - ngakho endlini kuyofika nokuchuma. Yini iphupho kakhulu? Wayesho ukuthini?
Ephusheni, elifanekisela ngempela ngobuqili umuntu quirky. Uyakwazi badalele noma inkathazo encane. Uzhik hhayi ngokwesiko endowed ngokuhlakanipha, ngakho iphupho kusho nokuvela kokuphila e uhlobo entsha oshelelayo.
Kodwa akunjalo elula ngamaphupho. Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde izenzo inyoka, nombala. Ukuhunyushwa Amaphupho kwabesifazane labesilisa zihlukile. Ngakho-ke, ukufunda incazelo enembile ngombono ebusuku, kufanele ikukhumbule ngisho nasemininingwaneni emincane kakhulu.
Incazelo jikelele iphupho
Amaphupho baphathe allegory noma okuhlangenwe nakho ngosuku. K Yini iphupho kakhulu? Ingabe kuhle noma kubi? Kufanele futhi wazi ukuthi - kungcono inyoka, kodwa akusho ukumela usongo ngqo abantu. Ngakho-ke, ukuhunyushwa kwalesi iphupho kungenzeka kuphela ukuchaza imininingwane. Izimo lapho kwakukhona kakade iphupho, kuyoba ukuqala.
Kuphela uma nizosho iphupho futhi, futhi akukho izenzakalo kwakungafanele, khona-ke uyoba isixazululo ngokushesha wezinkinga uyimbudane. Lesi sidalwa akusho ukuluma, akusiyo ezinesihlungu, ngakho konke ukukhathazeka nokwesaba ngokushesha yagubha.
Gcina kudla inyoka ephusheni kusho ukuxhumana nomuntu harbored okubi. Esenza nozungu, chaza inhlebo. Kodwa omkhulu ngeke balimaze, kodwa uyofundisa ingalali baqonde kangcono abantu.
Too zihambisana entanyeni - kuwuphawu olubi, ke zonke lezi zilo sifanekisela nenkohliso kothandekayo. Lokhu kusho ukuthi oshade naye ngamunye sekuqalile nasiphambeko, ukungathembeki komuntu oshade naye. Naphezu babeqaphile, lowo muntu oyoletha asemrarweni.
Oh, curled, noma basking elangeni - iphupho kusho ukuthi izindaba ezinhle isendleleni. Zijabulisa futhi amahlaya okuhle.
Musa njalo ukulala umbala lilondolozwe emva ukushaywa ekuseni. Kodwa uma isithombe umi ngokucacile phambi kwamehlo, ungathola ukuthi iphupho kakhulu umbala ethile.
White - sikufisela inhlanhla, injabulo. Lokhu ukugeleza imali noma ambikele. Ngisho tangle lwenyoka ezimhlophe lifanekisela inqwaba imali yamaphepha noma ukuvikeleka.
Red - ubudlova. Leliphupho - isixwayiso ingozi esondelayo emkhathizwe. Uma abomvu aqala ngempela endlini, endlini iyoba nazo izinkinga ngezinye. Uma ebheka kude, futhi nobunzima elele ikhefu ngokushesha.
Black - izinhlelo zangaphakathi. Lesi isixwayiso ukuthi isikhathi baziqonde bona ngokwabo kanye nezinkinga zabo. Xolisa noma ukwenza ukuthula.
Yellow - amandla engasetshenzisiwe. Ingxenye enkulu yale ndawo umbala - isikhumbuzi ukuthi kukhona imithombo yangaphakathi komuntu ukuthi ayadingeka ukusebenzisa nasezimweni ezinzima.
Green - ukuvuselelwa ukukhula. Ingena umsebenzi omusha noma ezingokomoya. Ukunqoba izakhiwo kanye nokwesaba kokuhlukana esidlule. Uma oluhlaza kakhulu curled round entanyeni - ngakho kunezithiyo. Nge yokunqoba wabo ukuqala impilo entsha.
Uma saba owesifazane
Kwabesilisa nakwabesifazane lifanekisela ngempela fan. Uma kwakuzoba elele, ngakho ngokushesha umnumzana olusha luvela emkhathizwe.
Owesifazane oshadile nephupho elinje kungaletha isingeniso ezithakazelisayo. Uma sibhekene yenhlwathi ingalali - lokhu kusho ukuqala ukukhulelwa.
K Yini ukuphupha likhulu kakhulu? usayizi inyoka elikushoyo ingcebo. Kukhulu kakhulu ukuba owesifazane liyajabulisa lwemali, ngeke skimp on izipho.
Kuye kanjani you behave kakhulu, kufanele uhunyushwe waphinde waphupha up. Dead, baxwayisa lesi simo siyingozi. Uma izinyoka eziningi they lunywa each nye ngalesosikhathi ukuxabana phakathi abangane ngeke bathathe isikhathi eside.
Uma thina yazithandela, bese yabuya - ke nomngane wakhe wakudala ezisheshayo ukubuyela. Uma imimoya eduze - ke iwuphawu injabulo ngokushesha.
Yini iphupho kakhulu, owanikhipha ekhaya ingane? Lokhu kusho okwesabekayo izenzo zezingane. Noma ukungathembani yabangane bawo.
Uma saba indoda
Uma umuntu uyaphupha ukuthi yaphenduka inyoka, lokhu kusho impumelelo amancane. Ngenxa unenkululeko oyinyoka namasu bazokwazi ukufeza umsebenzi ezindaweni eziphakeme. + Kodwa ukuntuleka ngokuhlakanipha, ukuchayeka kungaba yingozi, kanti impumelelo futhi ukuthandwa ekupheleni okusheshayo.
Kusho ukuthini uma nizosho iphupho kakhulu futhi uya olele ubuthongo na? Kufanele uqaphele futhi ikukhonzile. Cishe, osebenza nabo noma ophathini ibhizinisi ofuna ukuba zikhohlise noma ubuhlungu. Uma thina inyonyoba ekulaleni, zonke izinkinga nokwesaba bese uhambe.
Uma sizimisele bayozingela noma bagxume - iphupho kusho umgomo ekuseni.
Okuphakelayo inyoka ephusheni - ukuthola ingcebo noma inzuzo.
Sintanta emanzini kakhulu - ithuba lokuba endaweni ongayazi, noma isimo. Kukhulu ngezindlela leliphupho kuncike umbala amanzi. Uma lutho ke isimo esisha kuzoletha amathuba amasha. Uma amanzi liguqubele ezingcolile - ngakho kuyodingeka ukunqoba izithiyo ezingemnandi ngaphambi Isiphelo ngeke smile futhi.
Kungani iphupho izinyoka, izinyoka?
Inyoka - kuyisandulela ukuvela kwezindaba isitha. Kuyinto iwuphawu perfidy, njengoba singahambi ngobuqili, ukuziphatha okungafaneleki. Uma inyoka luwushevu, ke isimo ukungqubuzana ne isitha kungaba ngowakho. Sizoba ukudumazeka ukulahlekelwa. Uma inyoka (isibonelo, kakhulu) kuyoba non-enobuthi ke ukulala njalo ithuba ziyaphuma enqobile. Akwazi ukunqoba namaqhinga isitha.
K Yini iphupho izinyoka? Eziningi zalezi zilwane - kusho eziswebezelayo okuzungezile umona, uhlebe kusasebenza. Uma izinyoka okwakuthandelene ibe ibhola, ke olele ukubhekana nokuphila nokumangalelwa ngokungafanele. Umona zabanye ifaniswa nezimbewu agcwele izinyoka. Uma bengekho ezinesihlungu, ngisho lutho yokuphila sina kuzokwenzekani.
Kodwa snakebite lifanekisela ukukhashelwa kothandekayo. Lesi kuba yisikhathi ukubheka labo kholwa abangane. Mhlawumbe nabo wormed isitha.
Uma singakwazi uwine olele ephusheni inyoka, it is a indlela eqondile empumelelweni ekuseni. Ukuze owayegula - yokutakula.
Amaphupho ngezinsuku zeviki
Okuningi kuxhomeke amaphupho idluliselwe okuvelayo emini, ukwesaba noma izinkinga zangaphakathi. Akubona bonke phestri. Lokhu kuncike izinsuku lwenyanga ka ikhalenda kwenyanga. Futhi emasontweni amaphupho akuzona njalo ulwazi.
NgeSonto - ngoMsombuluko. Amaphupho acishe never zigcwaliseka. Basuke exhunywe nabantu obathandayo, nezindaba zomkhaya.
UMsombuluko - ngoLwesibili. Amaphupho akuvamile zigcwaliseka. Kuhlobene nemizwa yangaphakathi, imizwa, ubuthongo.
NgoLwesibili - ngoLwesithathu. Iqiniso kakhulu kuyaqabukela, ngokusebenzisa isikhathi eside. Ningaphathi umuzwa omkhulu.
ULwesithathu - ngoLwesine. amaphupho enjalo ngezinye izikhathi kweqiniso. Ixhunyiwe ngomsebenzi, professional umsebenzi ubuthongo.
ULwesine - ngoLwesihlanu. Ngokuvamile kweqiniso. Amaphupho kuthiwa kuhlobene nemizwa yangaphakathi, imizwa.
ULwesihlanu - ngoMgqibelo. Ngokuvamile kweqiniso. Veta intuthuko eduze ukuphila ingalali noma izihlobo zakhe.
NgoMgqibelo - ngeSonto. Phestri ngokushesha. Zihlobene isiphetho olele futhi abathandekayo bayo.
Kungani dream mayelana ingulube? Ukuze balungele lo "siyanyanyisa"?
Kungani baphupha imbobo ezinyweni? Dream ncwadi kuyobe ngiyisho impendulo
Dream Ukuhunyushwa - ukungcola dream iphupho, kodwa empeleni amafu ebuthene
ITHOLAKALA KUPHI I-helicopter in "GTA 5" ezindaweni ezahlukene?
Uyini antonym futhi elifanayo. Bomcondvofana, bomcondvophika, ladidako, imfundo yabo futhi ukusetshenziswa